Ganacsade caan ahaa oo xalay lagu dilay Kismaayo |
Ganacsade caan ahaa oo xalay lagu dilay Kismaayo
order Malegra DXT online cheap, buy Zoloft. Kooxo Bistoolado ku hubeesan oon heebtooda la garan ayaa xalay Suuqa Bakaaraha waxa ay ku dileen ganacsade caan ka ahaa Magaalada Kismaayo, kaa oo dhawaan Magaalada Muqdisho u yimid xaalado caafimaad.
Ganacsadaha la dilay oo lagu magacaabi jiray Xasan Cabdulle Shuuriye(Xasan Fanaay) ayaa la toogtay xili uu fadhiyay goob shaaha laga cabo, waxaana goobta isaga baxsaday kooxihii hubeesnaa ee dilka Ganacsadaha ka dambeeyay.
Xasan Cabdulle Shuuriye(Xasan Fanaay) oo saakay lagu aasay Magaalada Muqdisho ayaa kamid ahaa ganacsatada si weyn looga yaqaanay Magaalada Kismaayo, waxa uuna katirsanaa Guddiga gancsatada Magaalada Kismaayo.
Lama oga ilaa hada cida ka dambeysay dilka xalay Magaalada Muqdisho loogu geestay ganacsadahan Soomaaliyeed, mana jirto ilaa hada cid sheegatay masuuliyada dilka ganacsade Xasan Cabdulle Shuuriye(Xasan Fanaay).